खाद्य मेलामा नेपाल डाइटिसियन संघको परामर्श र स्वास्थ्य परीक्षण सेवा (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरिएको ३ दिने खाद्य मेला सम्पन्न भएको छ । नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आयोजना एवं नेपाल खाद्य बैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ संघको सह— आयोजनामा गत चैत्र ११ गतेदेखि सो मेला शुरु
“अब समागमको तरिका पहिलेको जस्तोमात्र कहाँ हुन्छ र ? तौरतरिका परिवर्तन भइसक्यो । यो मानिसलाई झुण्ड्याउने सामग्री हो । यो हात खुट्टा बाँध्ने पेटी हो । यो कोर्रा हो । हात खुट्टा बाँधिएको मानिसलाई यसमा झुण्ड्याएर यो
आम नेपालीहरुको बदलिँदो खानपान, धुम्रपान, र जीवनशैलीका कारण उच्च रक्तचाप तथा मुटुको रक्तनलीमा बोसो जमेर हृदयघात भएका विरामीहरुको संख्या बढ्दो छ । एन्जियोप्लास्टी तथा बाईपास सर्जरी हृदयाघातका विरामीको उपचारमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण उपचार विधि हुन् । मुटुको
कोलेस्टेरोल शरीरका प्रत्येक कोषहरूमा पाइने नरम चिल्लो पदार्थ हो । यसको उत्पादन प्रमुख रूपमा कलेजोमा हुन्छ । रगतमा आवश्यकभन्दा बढी कोलेस्टेरोलको मात्रा भए त्यसले शरीरलाई नराम्रो असर पार्छ । बढी भएको कोलेस्टेरोलले मुटुका धमनीको भित्री भित्तामा जम्मा
प्रा.डा. दिवाकर शर्मा अहिले सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिष्ट एवं शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्डियोलोजी विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ । नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस (न्याम्स) मा कार्डियोलोजीको प्राध्यापक पनि हो । उहाँले सन् १९९९ मा चीनको सन यात्सेन
पार्टनरको स्पर्शः भावनात्मक सन्तुष्टी र माया
यौन र सम्बन्ध यौन सम्बन्धले वैवाहिक दम्पत्तिको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । स्वस्थ र सुन्दर राख्न मद्धत गर्छ । यौन सम्बन्धले शारीरिक नजिक मात्र नभई भावनात्मक सन्तुष्टि र मायाको अनुभव गराउदँछ । १. यौनक्रियाले स्ट्रेस हर्मोनको स्राबमा कमी
दुर्गम ठाउँमा जन्मेका डा. आर.सी.को चिकित्सा फड्को
डा. दीर्घराज रोकाया क्षेत्री (आर.सी.) सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँ कार्यकारी निर्देशक मात्र नभई नेपालको वरिष्ठ हाडजोर्नी शल्यचिकित्सक तथा जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ । अहिलेको कार्य व्यस्तताका कारण उहाँले त्यति धेरै ओपिडी सेवा